DFS oo dagaal ku qaaday Shabaab, 3 sanno ka dib doorashadii M/weyne Farmaajo.
MUQDISHO(P-TIMES)- Ciidamadii ugu badnaa oo katirsan cutubyada ay tababartay dawladda Turkiga ayaa howlgalo ciidan ka wada gobalka SHabeelaha Hoose oo deris la’ah caasumada Soomaaliya, waxaana ay ciidamadu todobaadkii hore gaareen deegaanka Awdheegle oo 70KM u jira caasumada dalka ee Muqdisho.
Ciidamada dawladdu waxay si nabad ah kula wareegen degaankaas, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey in ay sidaas oo kale ku dhaw yihiin deegaano kale oo katirsan gobalka Shabeelaha Hoose oo kamid ah meelaha ay ugu xoogan yihiin Al- Shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray todobaadkii hore qaadida howlgalkan ciidan, ka dib markii ay soo baxday dhacdadii xarunta gobalka Banaadir oo ay ka dhasheen su`aalo badan oo ay is weydiinayaan shacabka Soomaaliyeed.
Warar ay baahiyeen warbaahinta dawladda waxaa lagu sheegay in la dhaawacay shalay qaar kamid ah madaxda Al- Shabaab, gaar ahaana Cali Maxamuud Raage oo ah Afhayeenka kooxdaas, balse ma jirto cid ilaa hadda xaqiijisay warkaas.
Saraakiisha dawladdu wey ka gaabsadeen arrimahan, balse idaacad ay leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa baahisay,iyadoo xiganaysa qaar kamid ah saraakiisha taliska ciidamada xooga dalka.
Cutubyada gaarka ah ee tababarada siisay dawladda Turkiga ee DANAB ayaa waday howlgaladii ugu dambeeyey, waxayna weeraradoodu u muuqdaan kuwa ay hadda kusii balaarinayaan deegaanada ay Shabaab gacanta ku hayaan.
Kooxda Al- Shabaab ayaa qaraxyo, dilal qorsheysan iyo weeraro argagixiso ka fulisa gudaha Soomaaliya, gaar ahaana caasumada dalka ee Muqdisho, waxaana la rumeysan yahay in howlaha kooxdan ay ka sameyso magaalada laga soo abaabulo gobalka Shabeelaha Hoose, howlgaladuna waxay culeyska ka dajinayaan Muqdisho.
In Shabaab ay dawladdu ku qaado guluf weerar oo culus ma dhicin mudadii uu xaafiiska joogay Madaxweyne Farmaajo, waxaana bishii April 2017 uu Madaxweynuhu iclaamiyey weerar lagu qaado Al- Shabaab, balse arrintaas ayaa fashilantay markii ay dawladdu waxba qaadi weyday.
Markale Madaxweynaha ayaa bishii October iclaamiyey duulaan kale, balse kaasna waxba kama dhaqaaqin, waxaana aan hadda la gareyn howlgaladan cusub in ay la mid noqon doonaan kuwii hore oo kale, iyadoo ay jiraan caqabado waa weyn.
Ciidamada dawladdu waxay Awdheegle qabsadeen 10 jeer wixii ka dambeeyey sannadkii 2011-kii, waxaana ay mar kasta dib uga soo baxayeen goobahaas, ka dib markii ay waayeen sahaydii ay u baahnayeen, waxaana taasi ay muujinaysa habacsanaan ka jirta gudaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.